Madaxweyne Yuusuf oo dadaal ugu jiray sidii Afguduud uga talin lahaa Kismaayo iyo taageerayaasha Barre Hiiraale oo diidan iyo Maxamed Dheere iyo Cabdiqeydiid oo sheegay in laga mamnuucay Muqdisho gawaarida muraayadaha madow. Ruunkinet 04/05/07
Wararka ka immaanaya magaalada Muqdisho ayaa ku waramaya in madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya uu dadaal ugu jiro sidii loo soo celin lahaa awooddii Cabdirasaaq Afguduud ee Kismaayo.
Warka ayaa intaasi ku daraya in taageerayaasha Barre Hiiraale ay oo ka mid ah kuwa ugu awoodda badan ee ku sugan ay si weyn u diidan yihiin arrintaasi.
Ra'isul wasaare Geeddi ayaa horay u ugu tilmaamay taageerayaasha Barre Hiiraale ee kaga xoog roonaaday Afguduud dagaalkii Kismaayo dhawaan ka dhacay mid ay ka dambeeyeen argagixiso.
Dhanka kale, munaasabad maanta xilka loogu wareejinayay Maxamed Dheere guddoomiyaha iyo duqa magaalada Muqdisho oo ka dhacaday Xamar ayaa waxaa ka hadlay mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Cabdi Qeybdiid oo dhawaan loo magacaabay taliyaha ciidanka Booliiska iyo Maxamed Dheere oo ka mid ahaa mas'uuliyiintaasi ayaa sheegay in cid aan ahayn mas'uuliyiinta dowladda oo ay ayagu ku jiraan in aysan Xamar ku wadan gawaarida muraayadaha madow.
Inta badan gawaarida lagu wato magaalada Muqdisho ayaa ah kuwa lagu qurxiyay muraayadaha madow ee bersoolka ah.
Gawaarida muraayadaha madow ayaa laga yaabaan in la ugaarsado sida ay sheegayaan dad ku sugan magaalaada Muqdisho maadaama ay mas'uuliyiinta dowladda oo kali ah wataan gawaarida murayadaha madow laga billaabo maanta.